Mursal oo shaaciyay inuu kulan jiro Berri iyo cabsi la qabo | KEYDMEDIA ONLINE
Mursal oo shaaciyay inuu kulan jiro Berri iyo cabsi la qabo
Mahad Salaad ayaa sheegay inay ka qeybgali doonaan kulanka, islamarkaana wixii dhibaato ah oo ka dhalata is hortaag lagu sameeyo uu qaadayo Mursal.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaanada Gollaha Shacabka ayaa Caawa loo diray fariin qoraalleed lagu wargeliyay inuu berri 9:00 A.M. waqtiga Soomaaliya uu jiro Kulan looga hadli doono COVID-19, Gudiga Xuduudaha iyo Sharciga Qaxootiga.
Dhanka kale, Mahad Salaan oo kamid ah 15-kii Xildhibaan ee laga joojiyay kulamada inay ka qeybgalaan ayaa sheegay inay berri tagayaan Villa Hargeysa, islamarkaana uu Mursal qaadayo Mas'uuliyadda dhibaato kasta oo dhacda.
"Fariinta Xildhibaanada loo soo diray ee lagu wargelinayo in uu jiro kulankii Golaha Shacabka beri oo Arbaco ah hada ayay na soo gaartay. Waanan tagaynaa kulankaas beri inshaa’allah. Wixii dhibaato ah oo nagu soo gaara sababta waraaqdii sharci darada ahayd ee Maxamed Mursal naga qoray 27 bishaan mas’uuliyadeeda isaga ayaa si shaqsi ah u qaadaya," ayuu yiri Mahad Salaad.
Kulankan ayaa la filayay inuu Isniintii shalay dhacay balse dib loo dhigay kadib markii Wakiiladda Beesha Caalamka ay Mursal ka dalbadeen inuu baajiyo maadaama laga cabsi qabay inuu dagaal ka dhaco hoolka Baarlamaanka.
Mursal ayaa lagu eedeeyay inuu wado mooshin qarsoon oo mudo-kordhin labo sano ah loogu sameynayo Farmaajo oo dhanka kale ka shaqeynaya inuu fashilmo kulanka Madaxda Maamul Goboleedyada dalka.
Cabsida la qabo ayaa ah inuu goobta dagaal ku dhexmaro Ciidanka ilaalada u ah Xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa dharcadka ah ee katirsan NISA kuwaasoo Sabtidii la wareegay Villa Hargeysa.